APA Pool League - Fahoriana ao amin'ny Paradisa?
Ny Fikambanan'ireo APA dia tokony hiditra amin'ny fanatanjahantena?
Ny ligin'ny dobo APA dia solontenan'ny mpilalao mahery sy manan-danja, olona manana fotoana tsara ao anaty bilia. Saingy mbola misy ny tantara?
Araka ny filazan'ny American Poolplayers Association (APA) amim-pireharehana, "Ny APA Pool League no ligin'ny lozam- piaramanidina lehibe indrindra eran-tany." Maherin'ny mpilatsaka an-tapitrisa tapitrisa eo ho eo no mitifitra ny dobo amin'ny iray na maromaro amin'ny 250 Frantsa APA manerana an'i Etazonia isan-kerinandro.
Ny APA dia mahafinaritra ny lalao sy ny fiarahamonina sosialy, ny fitsipiky ny lalao sanatria ary ny fomba tsotra handrafetana . Saingy misy ny sasany tsotra raha manontany tena ny fikambanana fa tokony hiresaka amin'ny hevitry ny Guide ity:
Asehoy anay ny vola
Ny mpiasan'ny APA dia mandoa mihoatra ny 11 tapitrisa dolara amerikana isan-taona fotsiny raha te-hilalao ligy fotsiny, fa tsy ny ankamaroany no miverina amin'ny mpilalao ho valisoa ho an'ny fifaninanana na amin'ny fomba hafa. Aiza ny vola omena? Ny ampahany kely amin'io vola io dia manome fifaninanana mahafinaritra ao Las Vegas, ny APA Nationals.
Ny toerana rehetra ao Vegas dia tarihin'ny ekipa, ny sasany amin'izy ireo dia marina ary ny sasany dia manao sombin-jaza mba hanatrehana azy. Ny sisa amin'ny vola dia mandeha any an-kafa - ny ankamaroan'ny dolara.
Ny tsy fahampian'ny mpanjifa
Ny tranonkala ofisialy ofisialin'ny APA dia manambara amim-pireharehana fa ny mpikambana ao dia manana mpikambana maherin'ny 260.000, ary nanampy fa nanomboka tamin'ny 1979 dia nanana 1 000 000 mpilalao milalao izy ireo.
Ny teboka dia ny mpilalao 750 eo ho eo no niala ny APA. Ny ankamaroany dia nanomboka tamin'ny faramparan'ireo taona 1980, rehefa nitombo haingana ny APA mba hampitahana ny BCA sy ny VNEA .
Ny iray amin'ireo olana goavana dia ny fifehezan'ny biraon'ny ligin'ny APA. Ny dobo filomanosana dia mety ho mahatsiravina. Sarotra ny maka sary an-tsaina ny fahatsapanao fa ratsy kokoa noho ny hoe ny mpanohitra dia mikendry kitapo am-bava, tsy misy dikany, fa mandresy ihany rehefa mamoaka baolina ao anaty paosy ny baolina.
Ny ligetra hafa dia mamerina mijery ny baolina tsy hita, fa tsy ny APA. Ny iray dia afaka miala tsikelikely amin'ny baolina mafy, ary manantena ny tsara indrindra.
Tsy hoe ny fahadisoan'ny APA ihany
Ny ligin'ny dobo APA dia manome fifaninanana mahatalanjona sy mahafinaritra ho an'ny mpandray anjara. Ny ekipa rehetra mifaninana ao amin'ny APA dia manohana ny firenena manantena ny handroso amin'ny fiadiana ny tompondaka eo an-toerana isan-taona, ary angamba ho an'i Las Vegas ho an'ny Tompondakan'i National APA amin'ny volana Aogositra. Tsy misy toy ny atmosfera Vegas amin'ireo mpifaninana mpifaninana an'arivony atsy ho atsy, manontany fotsiny ny mpilalao nilalao na kapiteny ekipa izay nanatrika.
Tsia, ny olana dia ny tsy fahampian'ny fanatanjahantsika rehetra dia tsy manana vahaolana mahomby sy matanjaka, ary fampiroboroboana ny fampahalalam-baovao tsara kokoa sy sary imasom-bahoaka. Azo antoka fa maro ireo olona nanolo-tena hanao fanatanjahantena, tsy ampy ny ezaka ataon'ny ekipa.
Ary na dia eo amin'ny fanatanjahan-tena samihafa toy ny dobo sy ny bilardo dia tsy fahampiana mampalahelo izany.
Lalao Olaimpika - Hanondraka Sambo ve ny Pool?
Ahoana no hahatonga azy ho mpilalao Pool Pool Professional?
Ahoana no hanatsarana ny ligy sidina?
Antony lehibe tokony hitiavanao dobo filaminana sy biletà
Mandray anjara amin'ny lalao baolina kitra - Miomàna amin'ny DI
Fomba hamakiana ny mpitsidika Volleyball
Manan-java-manidina ve ny volony any Gulf?
Ahoana ny fampiharana ny kasety fanoratana amin'ny sambo skateboard
Fomba 10 Manampy ny ray aman-dreny hiasa an-trano ny ankizy
Atsahatra ny fiasan-drivotra mba hanesorana toaka
Ny biography of John D. Rockefeller
Kairos Famaritana sy ohatra
Ny lalàn'ny fahafolonkarena
Ny fiantraikan'ny Olmec Civilization amin'ny Mesoamerica
Citta amin'ny Bodisma, dia toe-tsaina
Inona no toetran'ny fiantohana hafahafa?
Ireo mpamorona malaza: A hatramin'ny Z
Ampianaro ny fifidianana 2016: Fandalinana ny mpifaninana sy ny olana
Tetikasa momba ny toetr'andro: Ahoana ny fomba fijerinao ny habeny?
Velona ny Live Rock Band Live
Korrelation and Causation in Statistics
Ahoana no hipoitra amin'ny endri-panehoana mampiavaka na mampahafinaritra
Tanjona amin'ny famaritana ny fandaharana sy ohatra
Ity ny fomba hanavahana eo anelanelan'ny dragona sy ny mandoza
Ny fomba fanaovana ny volley-volley
Vaovao Vaovao ho an'ny Anime aho. Aiza no hanombohako?
Feno fankasitrahana an'i Ted Cruz Memes
Free Apps Frantsay
Jupiter Hammon, Rain'ny American American Poetry
Ny finoana sy ny fombam-pivavahana Presbyterian
Torolalana amin'ny dingana amin'ny dingana atao amin'ny fanaovana fitetezana ny lehilahy mandihy
Antokom-pinoana sy tantaran'ny Black Panther